सामुदायिक शक्ति- विचार - कान्तिपुर समाचार
facebook.com/oohiashu प्रकाशित : माघ २१, २०७५ ०७:५५
औषधि पसलमा पाइने भिटामिनको झोलले फाइदा गर्दैन, उत्पादक कम्पनीको बैंक ब्यालेन्स मात्रै बढाउँछ । दैनिक भोजन सन्तुलित बनाए शरीरमा भिटामिन पर्याप्त हुन्छ ।
माघ २१, २०७५ डा. अरुणा उप्रेती
काठमाडौँ — मैले केही वर्षअघि डा. रमेशकान्त अधिकारी (वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ) संँग भिटामिनका चक्की झोल र बालबालिकाको स्वास्थ्यबारे जिज्ञासा राखेकी थिएँ । ‘पोषणयुक्त खानाको सट्टा मान्छेले सिसीमा भएको महँगो भिटामिनको झोल खान्छन् । कुनै पनि वैज्ञानिक अनुसन्धानले भिटामिन झोलका रूपमा खानुपर्छ भनेर पुष्टि गर्दैन ।
हामी स्वास्थ्यकर्मीले भिटामिन बोतलका झोल वा औषधिका रूपमा प्रयोग गर्नु पर्दैन, तिनको औचित्य छैन भन्ने जानकारी दिनसकेका छैनौं । धेरै जनालाई यसबारे भ्रम छ,’ उनको भनाइ थियो ।
बिरामको चापले होला, स्वास्थ्यकर्मीले झोल भिटामिन चाहिँदैन भनेर बुझाउनुको सट्टा त्यही भिटामिन औषधि लेखेर दिन्छन् । घरमा पाइने र स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने खाद्य वस्तुको उचित प्रयोग गरेर प्राय: सबै किसिमका भिटामिन पाउन सकिन्छ । औषधि व्यवसायमा लागेका एक व्यक्तिले मलाई भने, ‘भिटामिनको सिसी किन्ने मानिसलाई म भन्छु– त्यसमा देखाइएको फलफूलको फोटो घरमा टाँस्न किने हुन्छ । भिटामिनको सिसीले भने स्वास्थ्यलाई कुनै फाइदा गर्दैन ।’
कतिपय औषधि उत्पादक कम्पनीले विक्रेतालाई आफ्नो औषधि बढी बेच्न ‘डिल’, ‘बोनस’ भनेर ६० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा दिएका हुन्छन् । त्यही नाफाका कारण विक्रेताले प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिएको औषधिको सट्टा बढी नाफा हुने अरू औषधि बेच्छन् । यसो गर्दा बिरामीले उचित औषधि पाउँदैन । महँगो पर्छ ।
औषधिका साथमा भिटामिन पनि भिडाउने चलन हामीकहाँ सामान्य भइसकेको छ । एन्टिबायोटिक औषधि लेख्दा भिटामिन अनिवार्यजस्तो गरी लेखेको पाइन्छ । यो समस्या तराई क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । यस्ता भिटामिन सिफारिस गर्ने कतिपय चिकित्सकको तर्क हुन्छ, ‘एन्टिबायोटिकले कमजोरी गर्ने भएकाले भिटामिन लेखिएको हो ।’
म ६० वर्षकी भएँ । दुईजना छोरी छन् । मैले न आफैंले कहिल्यै भिटामिनको झोल वा चक्की खाएँ, न कहिल्यै छोरीहरूलाई खान दिएँ । भिटामिनले भरिपूर्ण पौष्टिक खाना ज्वानोको झोल, तरुल, आलु, पालुंगो भने पर्याप्त खाएँ । गर्भावस्थामा र सुत्केरी हुँदा पनि फलामको चक्की र भिटामिन बीका चक्की खाइनँ ।
पेटभरि दाल, भात, गुन्द्रुक, मकै, चना खाएँ । मलाई न कहिले रक्तअल्पता भयो न भिटामिनको कमी भयो । खानेकुराबाटै शरीरलाई चाहिने भिटामिन र क्याल्सियम पाउँदा मेरो आर्थिक बचत पनि भयो ।
कतिजना आमाबुबा छोराछोरीले खाना खाएन भनेर भोक बढाउने औषधि किन्न चाहन्छन् । ‘साइप्रोहेप्टाडिन’ नामक भोक बढाउने सिसी जताततैका औषधि पसलमा देखिन्छ । बेलायतमा यो एलर्जी भएको व्यक्तिलाई दिइन्छ । ‘भोक बढ्नु र तौल बढ्नु’ त्यो औषधिको नराम्रो असर (साइड इफेक्ट) हो । नेपाल र भारतमा त्यही साइड इफेक्टलाई राम्रो भन्ठानेर कतिपय आमाबाबुले बच्चाका लागि किन्छन् ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका एक डाक्टरले भनेका थिए, ‘भोजन पचाउन भनेर दिइने बिभिन्न खाले मल्टी भिटामिन औषधि
र रगत बढाउने नाममा दिइने औषधि बेकार छन् ।’
अक्सफामबाट प्रकाशित किताब ‘बिटर पिल्स’मा डायना मेलरोजले लेखेकी छन्– यो औषधिको तेस्रो विश्वका लागि गरिने विज्ञापनमा भनिएको छ, ‘बच्चालाई दिन सकिन्छ । यसले कलेजोमा प्रभाव पार्दैन ।’ त्यही औषधिको विज्ञापनमा बेलायतमा लेखिएको छ, ‘कलेजोमा कुप्रभाव पर्छ, बच्चालाई दिनु हुँदैन ।’ यसरी विभिन्न औषधिका कम्पनीले तेस्रो र प्रथम विश्वका लागि भिन्नाभिन्नै मापदण्ड अपनाई एकातिर गलत ज्ञान दिइएको छ ।
भिटामिन, क्याल्सियम आदि बनाउने कम्पनीका मालिकका छोराछोरी वा श्रीमतीले पक्कै यस्ता भिटामिनका झोल खाँदैनन् । उनीहरूलाई यसले फाइदा गर्दैन भन्ने थाहा हुन्छ । तर अन्य मानिसलाई बेचे उनीहरूको ‘अर्थ’ बढ्छ ।
स्वास्थ्य शिविरमा स्वास्थ्य जाँच गराउन आएका महिलालाई केही औषधि दिइयो भने उनीहरू भिटामिन माग्छन् । मैले ‘तपार्इंलाई भिटामिन चाहिँदैन, घरमा भएको दाल, भात, रोटी, हरियो तरकारी खानुस् । त्यही हो, भिटामिन । हामीले भिटामिन बाँड्ने गरेको छैन’ भन्दा कतिजना बिरामी असन्तुष्ट भएर जान्छन् । बाहिर गएर आपसमा कुरा गर्छन्, ‘एउटा भिटामिन पनि नदिने, के हो, त्यस्तो डाक्टर ?’
यसमा बिरामीको दोष छैन । स्वास्थ्य शिविरमा जाने स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालमा बिरामी जाँच्ने डाक्टर र स्वास्थ्यचौकीका स्वास्थ्यकर्मी सबैले ‘सिसीको भिटामिन नखाए कमजोरी भइन्छ’ भन्ने हावा फैलाइदिएका छन् । औषधि कम्पनीले बनाएको भिटामिनका सिसीले बिरामी, उनका परिवारको पैसा व्यर्थमा खर्च हुन्छ, कम्पनीको भने बैंक ब्यालेन्स बढ्छ । भिटामिनको कमी भएका भनिएकाहरूलाई त्यस्ता झोल र चक्की कामै लाग्दैन ।
कोही कुपोषण भयो, कमजोर भयो कि भिटामिनको कमी भएको छ भन्ने स्वास्थ्यकर्मी छन् । कमै मानिसलाई मात्र थाहा हुन्छ कि दैनिक भोजनलाई सन्तुलित बनाए शरीरमा पर्याप्त भिटामिन पुग्छ । हामीलाई भिटामिन एकदमै कम मात्रामा चाहिने भए पनि यिनको ठूलो महत्त्व छ । बिरामीले ‘लौ न एउटा भिटामिन लेखिदिनुस्’ भनेर आग्रह गर्दा लामो कुरा गरेर सम्झाउनुको साटो ‘लौ त’ भनेर भिटामिन लेखिहाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ ।
प्रकाशित : माघ २१, २०७५ ०७:५४